Tourism in Khaptad National Park, Nepal | भु–स्वर्ग अर्थात खप्तड क्षेत्र
Monday, 15 October 2018 05:10 pm, Nepal
टाढा-टाढासम्म फैलिएका घाँसे मैदानका पाटन। कसैले मिलाएर काटेको जस्तो तह मिलेको हरियो दुबो। त्यसमाथि वरिपरि रङ्गीविरङ्गी फूल, मानौं आउनेको स्वागतमा कुनै छिर्केमिर्के कार्पेट 'ओच्छ्याइएको होस्! एकै छिनमा चर्को घाम, एकैछिनमा धमिलो बादल र सिमसिम पानी। अझ् कात्तिकदेखि फागुनको समय पर्‍यो भने त जतासुकै हिँउ, स्निग्ध पहाड। सेतै डाँडा, सेतै जङ्गल, फूल पनि सेतै, मैदान पनि सेतै। हिउँको मैदानमा लडीबुडी खेल्न स्वीट्जरल्यान्ड पुग्नुपर्दैन, यो सेवाको लागि खप्तड हाजिर छ। सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा प्रसिद्ध गन्तव्यस्थल खप्तड घुम्नका लागि जेठ, असारदेखि मङ्सिरसम्मको समय उपयुक्त मानिन्छ।
यहाँ २५ मैदान मात्र छैनन्, वरिपरि ५३ वटा थुम्काहरू छन्, जसलाई स्थानीय भाषामा झोती भनिन्छ। किम्वदन्ती अनुसार दोस्रो नम्बरका पाण्डव भीमले हलो जोत्दा फालीले फ्याँकेको माटोबाट यी थुम्का बनेका हुन्।
समुद्र सतहबाट २४०० देखि ३७०० मिटर उचाइमा फैलिएको खप्तड क्षेत्रको बीचमा उभिएको छ १२ हजार फिट अग्लो खप्तड लेक। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जले वरिपरिबाट घेरा हालेको खप्तड क्षेत्रले बाजुरा, डोटी, बझाङ र अछाम गरी चार जिल्लालाई छुन्छ। नेपालका सबै डाँडामा कुनै न कुनै देवताको थान भेटिन्छ, खप्तडमा पनि नहुने कुरै भएन! जम्मु कश्मीरबाट ५३ वर्षअघि शिवनाथ डोग्रेको नाम लिएर खप्तड आएका फकिर खप्तड बाबाको नामले प्रसिद्ध मात्र भएनन्, खप्तडलाई पनि प्रसिद्ध बनाए। यहाँ वरपरका त्रिवेणीघाट, सहस्रलिङ्ग, बाबाकुटी, फिन्टेढुङ्गोलगायतका स्थानलाई धार्मिक महत्वका मानिन्छ। सामाजिक हिसाबले खप्तड क्षेत्रलाई नेपाली सभ्यताको विकास भएको स्थानका रूपमा पनि लिइन्छ।
खप्तड पुग्ने धेरै बाटो भएपनि डोटीको सिलगढीबाट जाने बाटो धेरै चल्तीमा रहेको छ। ५/७ दिनको सिलगढी- खप्तड यात्रामा सामान्यतया रु.५,००० खर्च लाग्छ। सिलगढी पुग्नका लागि पूर्व-पश्चिम राजमार्गको अत्तरिया, कैलालीबाट नौ घण्टाको बस यात्रा गर्नुपर्छ। अत्तरियाबाट सिलगढीको एकतर्फी बस भाडा ५५० पर्छ भने, नेपालगञ्जबाट १,००० पर्छ। अथवा नेपालगञ्जबाट हवाईजहाजबाट डोटी उत्रिन पनि सकिन्छ। तपाई हेलिकोप्टरको व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ भने सोझै खप्तड अवतरण गर्न पनि सकिन्छ। सिलगढी- साँफेबगर सडकखण्डको शान्तिनगरबाट खप्तड क्षेत्र जोड्ने सडक निर्माण शुरु भएकाले केही वर्षमा खप्तडको बाहिरी क्षेत्रसम्म गाडी पुग्ने आशा गरिएको छ।
निकुञ्ज गेष्ट हाउस, होटल, क्याम्प
अवधिः ५-७ दिन
प्राकृतिक सौन्दर्य, हिउँको वर्षा
उपयुक्त मौसमः जेठ-साउन र असोज-मङ्सिर
खर्चः रु.६०००-रु.८००० (हवाईभाडा बाहेक)
उचाइः ३५०० मिटर
सिलगढीबाट शुरु हुन्छ, पैदल यात्रा। पहिलो दिन बगलेकमा दिउँसोको खाना, झिग्रानामा बास। दोस्रो दिन विसपानीमा खाना खाएर हिँडियो भने खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको गेष्टहाउसमा बास बस्न पुग्न सकिन्छ। तेस्रो दिनबाट शुरु हुन्छ खप्तड घुमाइ। खप्तड बाबाको कुटी, घोडादौड पाटन, नागढुङ्गा क्षेत्र, बल्दजोडी (भ्युटावर), सहस्रलिङ्ग, गणेश पाटन, त्रिवेणी, भीमघट्ट, भीमलौरी, सीतापाइला, छिन्तेढुङ्गो खप्तडका घुम्ने ठाउँ हुन्। यी ठाउँ तीन दिनमा घुम्न सकिन्छ। तर, हरेक दिन वास बस्न निकुञ्जकै गेष्टहाउस फर्कनुपर्छ। यदि तपाई अझ्ै बढी घुम्न चाहनुहुन्छ भने त्रिवेणी खोलाको तीरैतीर हिँडेर भेलछड्डो (सुन्दर छहरा) पुगेर बास बस्न र त्यहाँबाट साइलहुँदै बसमा दिपायल फर्कन सकिन्छ।
पर्याप्त समय छ भने, खप्तडबाट दुई दिनको हिँडाइमा बझाङको सुरमा सरोवर, सुन्दर ताल, अछामको रामारोशन, बाजुराको बडीमालिका वा डोटीको बडीकेदार पनि पुग्न सकिन्छ। खप्तडको घुमघाम सकेर अछामको साँफेबगर निस्किएर पनि फर्किन सकिन्छ। खप्तडलाई नै लक्षित गरी काठमाडौं-दिपायल-साँफेबगर हवाई उडान शुरु गर्ने योजना रहेको खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिका निर्देशक यमबहादुर बमले बताए।
गन्तव्यस्थलका रूपमा खप्तड चर्चित भए पनि यो निकै अप्ठ्यारो गन्तव्य मानिन्छ। ०४३ देखि ०६४ सम्ममा खप्तड पुग्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या २५२ थियो। यसैबाट खप्तड मेहनती र जाँगरिलाको गन्तव्य हो भन्ने थाहा हुन्छ। खप्तड जानुभन्दा अघि पाल, स्लिपिङ व्याग, खाना पकाउने सामानसँगै लिएर जानु बेस हुन्छ। साथै, चाउचाउलगायतका ड्राइफुड पनि बोक्नु राम्रो। हिउँको जङ्गलको सफरमा निक्लिँदा बाक्ला लुगा, पञ्जा चाहिन्छ भनेर त सम्झाउन नपर्ला!
kuber :Nov 17, 2012 12:37:53 PM
एक चोटी सबैले जानु पर्ने ठाउँ जहाँ जादा स्वोर्ग को अनुभव हुन्छ .म त् गैसके तपाई नि जनुष है गया पछी छुट्टै स्वाद पाउनु hunechh /